RAHARAHA BRICKAVILLE : Marary i Romeo, nandositra i Carolle
Mivoatra ny raharaha Brickaville. Raharaha izay mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao. 4 décembre 2017
Raha tsiahivina, taorian’ny fivoriana notanterahin’ny Omc Toamasina ny alarobia 29 novambra, dia namoahana didy fampisam- borana indray Randrianandrasana Romeo Lucien fantatry ny maro amin’ny solon’anarana Dada, 29 taona sy Rahaingosoa Elie Carolle 35 taona. Izy ireo izay nosamborin’ny zandary tao Brickaville herinandro vitsy lasa izay ary voampanga ho « ati-doha » tamin’ny tora-bato sy fanafihana fiara ao Brickaville.
Tamin’ireo olona 11 nosamborin’ny zandary tamin’ilay raharaha tora-bato sy fanafihana fiara, dia 5 no nahazo fahafahana vonjimaika rehefa niakatra teny amin’ny Fampanoavana Toamasina ny andron’ny alarobia 22 novambra. Anisan’ireo nahazo fahafahana vonjimaika i Carolle sy Romeo. Niteraka resabe io fahafahana vonjimaika io ary niteraka fifamaliana an-gazety teo amin’ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina sy ny fianakaviamben’ny zandary.
Ho an’ireo mpitatitra mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa dia nisy mihitsy ny fitokonana faobe natao ny andron’ny alarobia 29 novambra nanehoana ny tsy fahafaliana tamin’ny fahazoan’i Carolle sy Romeo fahafahana vonjimaika. Ny alarobia 29 novambra, vokatry ny fepetra noraisin’ny Omc Toamasina, dia niverina tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny ny fitsarana. Nivoaka indray ny didy fampisamborana ho an’i Romeo sy Carolle. Ny alakamisy 30 novambra, dia voasambotra tao Brickaville i Romeo. Ity farany izay tsy nitsoaka.
Nisy andian’olona nirohotra nankeny amin’ny hopitaly
Hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra kosa (alahady maraina), dia mbola karohina i Carolle. Momba an’i Romeo manokana, araka ny vaovao voaray, dia nampidirina hopitaly tao Brickaville ny alin’ny zoma lasa teo ny tenany. Raha ny filazan’ireo fianakaviany dia « vokatry ny daroka nataon’ny zandary azy no anton’izany ». Fihetsika izay tsy nahafaly ny andian’olona sasany ao an-toerana. Ny loharanom- baovao hafa kosa dia milaza fa « adin-tsaina no mahavoa an’i Romeo ka namparary azy fa tsy daroka izany ary tsy marina velively ny filazàna fa mandoa rà izy ». Ny alin’io zoma 1 desambra io, dia nisy andian’olona manodidina ny 200 eo ho eo tonga teny anoloan’ny hopitaly Brickaville ary natory tao mihitsy. Fianakaviany sy mponina avy eny amin’ny fokontany St Jeannot izay fokontany fonenan’i Romeo ireto tonga teny amin’ny Hopitaly ireto raha ny fanazavana voaray. Tsy nisy fanimban-javatra fa am-pilaminana tanteraka no nanaovan’izy ireo ny fidinana teny amin’ny hopitaly. Takian’izy ireo amin’ny zandary ny fanajana ny zon’olombelona.
Nitohy ny antoandron’ny sabotsy 2 desambra ny fidinan’andian’olona teny amin’ny Hopitaly Brickaville saingy efa niha vitsy. Hentitra ny fiambenana ataon’ny zandary an’i Romeo ao amin’ny Hopitaly Brickaville. Ny tolakandron’ny sabotsy 2 desambra, dia nisy ny fifampiresahana teo amin’ny zandary notarihin’ny kaomandin’ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena Toamasina, ny Kapiteny Randriamanantena Léon, sy ny fianakavian’i Romeo.
Nohazavaina tamin’ny fianakavian’i Romeo fa raharaham-pitsarana no misy ka tsy misy tokony hidiran’ny resaka torapo. Nanaiky ny fandaminana noho izany ny fianakavian’i Romeo ka niala nivorivory teny amin’ny hopitaly. Ireo havany tena akaiky azy ihany no mijanona ao amin’ny hopitaly mikarakara ny marary.
Ny angom-baovao avy any Brickaville hatrany no nahalalana fa ny fahazoan-dalana avy amin’ny dokotera mitsabo an’i Romeo ao amin’ny hopitaly Brickaville no mamaritra ny fotoana hiakaran’i Romeo Fampanoavana ao Toamasina indray.Ho hita eo ny ho tohin’ny raharaha.